2 Ithiphu # 2: Yiba ne-Thesaurus Ready og Thatha Creative!
3 Ithiphu # 3: Sebenzisa amagama, ama-sagnir, noma ngisho namazwi achazayo ahlobene nawe kanye nokuqukethwe kwakho
4 Ithiphu # 4: Uma Yonke Ihluleka, Sebenzisa i-Blog Nafn / Word Generator
Igama lebhulogi yakho kufanele lihlotshaniswe nohlobo lokuqukethwe okwenzayo. Cabanga ukuthi unomlando obizwa ngokuthi "i-Foodie hornið" kodwa okuqukethwe kwakho konke okuphathelene nokubuyekezwa kwemikhiqizo yemisindo yemvelo yamadoda, uzophelisa abafundi abadidekile ababengalindele ibhulogi yokudla.
Þú ert að tala um yakho imayelana namasu wokumaketha okudijithali, stuðla að því að þú sért ekki að tala um það og gera það að verkum að ég er siðblindur (siðareglur fyrir SEO), nútímalegt og stafrænt, i-SEM nokunye).
Ithiphu # 2: Yiba ne-Thesaurus Ready og Thatha Creative!
Hlanganisa lawo mazwi ku -sasausus.com og þú þarft að nota amagama afana nesidla, i-grub, i-fresh, ilungile, injabulo, i-goodies, ukudla, i-munchies, eqinile, i-hearty, i-veggies, nenjabulo. Engeza amanye alawo mazwi ndawonye (njengokuthi i-munchies ye-vegan eða zokupheka ukudla okufanele) futhi voila, unegama lebhulogi yakho.
Ithiphu # 3: Sebenzisa amagama, ama-sagnir, noma ngisho namazwi achazayo ahlobene nawe kanye nokuqukethwe kwakho
Ungase unqume ukuthi ukusebenzisa i thesaurus ngokwanele, kodwa uma ufuna ngempela ukuthatha umdlalo wakho wokubiza igama elilandelayo, qala ukufaka amagama, izenzo kanye / noma amagama achazayo.
Ngomzekelo webhulogi wezokudla, ungangeza izina noma amagama achazayo ahlobene nawe njengebhulogi, okungaba: u-boss, umfana, intombazane, oqalayo, ukudla, izeluleko, isidlo sasekuseni, isidlo sakusihlini is,.
Zibeke ndawonye futhi uzothola amagugu afana nokudla okufanelekile kwentombazane, i-vegan yfirmannssnauð, ukupheka kwekhishi ehlanzekile, noma i-club yokudla enempilo.
Lokhu kudinga kancane ukucabanga okungaphandle kwe-ibhokisi kodwa okwenziwe kungaba yindlela auka yokwengeza kumnandi egameni lakho lebhulogi. Ezinye izibonelo ezinhle zizoba yi-snackzilla, i-veganized, i-sizzlerella, i-healthsy.
Ithiphu # 4: Uma Yonke Ihluleka, Sebenzisa i-Blog Nafn / Word Generator
Okuhle nge-Wordroids ukuthi ungabeka umkhawulo wamagama akho, uchaze ikhwalithi yamagama, notaðu amaphethini kuwo, notaðu ngisho nokutholakala kwegama lesizinda. Lokhu kusho ukuthi ungabheka ukuthi igama olithandayo ku-.com elibhalisiwe noma cha, ukukhipha ukucindezeleka kokukhwabanisa okumangalisayo nokuthola ukuthi kuthathwe.
Ngamawebhusayithi angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezi-Inthanethi namuhla، njengomnikazi wesinye salezo zingosi، ungase ucabange ukuthi akusikho